मुकेश अम्बानीका छोरा अनन्तले १८ महिनामै कसरी घटाए १०८ किलो तौल ? | Ratopati
मुकेश अम्बानीका छोरा अनन्तले १८ महिनामै कसरी घटाए १०८ किलो तौल ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeचैत २८, २०७५ chat_bubble_outline0
एजेन्सी – व्यवसायी तथा एसियाकै धनि मुकेश अम्बानीका कान्छा छोरा अनन्त अम्बानीले १८ महिनामै १०८ किलो तौल घटाएका छन् । सन् १९९५ मा जन्मिएका अनन्तको तौल ५ वर्ष पहिले १७५ किलो थियो ।
अत्याधिक माटोपनको कारण ट्रोलको सिकार भइरहने अनन्त अम्बानी अहिले २४ वर्षमा मात्रै छन् ।
अनन्त लामो समयसम्म दमको रोगी थिए । उनले ‘हाइ डोज’ को औषधि सेवन गर्ने गर्थे जसको कारण उनको तौल बढेर १७५ किलो पुगेको थियो । सन् २०१३ मा आईपीएल म्याचमा १८ वर्षका अनन्त मुम्बई इन्डियनको जितमा ट्रफी लिन गएका थिए । जुन तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भयो ।
उनले सन् २०१६ मा कडा मेहेनत गरे र १८ महिनामा १०८ किलो तौल घटाए । उनलाई विनोद चन्नाले प्रशिक्षण दिएका थिए । चन्नाले १२ सेसन्सको लागि १.५ लाख फि लिएका थिए । चन्ना अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीदेखि जोन अब्राहमसम्मका फिटनेट प्रशिक्षक हुन् ।
यसरी कम गरेका थिए तौल
–हरेक दिन कार्डियोमा २१ किलोमिटरको व्यायाम
–तौल घटाउँन योग
–तौल प्रशिक्षण भनेको क्यालोरी पगाल्ने हो जसले गर्दा मामंपेशी फिट हुन्छ ।
–शरीरको स्थिरता वृद्धि गर्न स्ट्रेचिङ
–बोसो पगाल्नको लागि हाई इन्टेन्सिटी कार्डियो कसरत
–तौल घटाउनको लागि खाद्य पदार्थ सही समय र सही मात्रामा हुन जरुरी हुन्छ । उनले चिनी नभएको र कार्बोहाइड्रेट जस्ता खाद्यपदार्थमा जोड दिए र फास्ट फुड बन्द गरे ।
धुम्रपान छोड्न तीन उपाय
सुत्नुभन्दा पहिले एक गिलास तातोपानी
अफिसमा ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नेलाई मानसिक समस्या
आइतबार कुन राशिका लागि शुभ ?